China ọkara Automatic nkpuchi Machine Kn95 nkpuchi Machine echekwa nkpuchi slicing igwe factory na-emepụta | Haojing
Ọkara Automatic nkpuchi Machine Kn95 nkpuchi Machine echekwa nkpuchi slicing igwe
Igwe ihe nkiri na-agba ọsọ dị elu na-eji teknụzụ na-ekpo ọkụ ultrasonic iji mepụta 2-5 n'ígwé nke ihe nru ububa nke urukurubụba. gụnyere gụnyere usoro eriri igwe nri, imi doo nri, nkpuchi ụkpụrụ ịgbado ọkụ, nkpuchi ọnwụ, na isi ahu ọnwụ.
Akụrụngwa na-emepụta isi ahụ nke ihe nru ububa nke urukurubụba site na nkwado nke usoro nri, usoro ịmepụta akwa, na imi imi na-egbutu ma na-egbutu usoro.
Obere slicer a bụ ngwaọrụ anyị mepụtara iji belata ọnụahịa njem. Tụnyere nkịtị slicers, ọ bụ obere na-aba ma enyene obere ohere, nke nwere ike n'ụzọ dị irè belata ahịa 'njem na-akwụ ụgwọ.
Ọ bụ ezie na akụrụngwa ahụ dị obere, ọrụ ya na ọsọ ya adịghị obere. Anyị na-etinye akwụkwọ nkpuchi na ịcha mma na ebu iji belata olu akụrụngwa. Ihe nkpuchi nkpuchi nwere ike ịmepụta ihe nkpuchi 30 kwa nkeji.
Ejiri mpempe akwụkwọ eji ngwaọrụ mkpofu. N'ime usoro mmepụta nkpuchi, a ga-enwe mkpofu ákwà. Enwere ike ịnakọta akwa ndị a site na ngwaọrụ anyị na-enweghị nchịkọta akwụkwọ ntuziaka, na-ebelata ụgwọ ọrụ.
Akụkụ nke akụrụngwa na-eji ụdị ndị ama ama, dịka Schneider, Siemens na AirTAC na ndị ọzọ. Anyị nwekwara ike ịgbanwe akụkụ ụdị dị ka ihe ndị ahịa chọrọ.
Ultrasound nke akụrụngwa na-eji ụdị ụlọ a maara nke ọma, nke nwere ike ọ bụghị naanị hụ na ọrụ ndụ nke ultrasound, ma na-emekwa ka njedebe akara nke nkpuchi mara mma.
Tupu ebufe akụrụngwa ahụ, anyị ga-eme ọgwụgwọ nchara mgbochi maka akụrụngwa ahụ, ma were vidiyo ọrụ, ma nyekwa nsogbu akụrụngwa na ngwọta iji hụ na ndị ahịa nwere ike iji akụrụngwa ahụ na-ejikarị.
1.Ultrasonic ịgbado ọkụ technology na nakweere ka okokụre ngwaahịa mara mma, mma na environmentally friendly.
2.The dum mmepụta akara na-akpaghị aka, oru oma na-arụ ọrụ na-azọpụta site na nri, imi akara ntinye, onu akara na ọnwụ.
3.The etiti Ọdịdị ka nke aluminum alloy, dum akara bụ inogide, mfe ọcha, mara mma na na.
4. komputa PLC mmemme njikwa, servo mbanye, nnukwu ogo nke akpaaka. Nnukwu nkwụsi ike na ọnụego ọdịda ala.
5.Automatic erughị ala akara nke ngwaọrụ iji hụ na itule nke erughị ala nke ngwaọrụ.
6. Igwe ahụ dị obere, obere na ọ naghị ewe ohere.
1200mm（L）* 600mm (W) * 1210mm (H) Nkeji
30-50 iberibe / min
Ngwa ọdịda ọdịda
N'ozuzu ikuku ikuku
Non-kpara akwa (The oyi akwa nso ihu）
Non-kpara akwa (Oke oyi akwa）
Agbaze fụọ akwa oyi akwa
ọkụ ikuku na-abụghị kpara akwa akwa
Nkọwapụta nke imi mmanya
Ihe nkpuchi nkpuchi, nke a na-ejikarị ebi akwụkwọ na ihe nkpuchi
Usoro imi imi
Tumadi iji mee ka ndị akwa nke imi
Tumadi iji na-amalite na-akwụsị akụrụngwa
Nke gara aga: n'ọnụ isi eriri nkpuchi ịgbado ọkụ igwe emepụta Single ojii ji kpachie oghere ihu banding igwe
Osote: china n95 nkpuchi na-eme igwe Igwe nkpuchi ihu igwe nkpuchi
China Automatic Ewepụghị nkpuchi Machine
China Ewepụghị Nkpuchi Machine
China nkpuchi Ear Loop ịgbado ọkụ Machine
China N95 Nkpuchi Ime igwe
China Ultrasonic Nkpuchi Ime Machine
Ntị Loop Face Mask Machine Manufacturers
Earloop nkpuchi Machine Supplier
Edge Head eriri eriri Welding Machine Manufacturers
Edge Head eriri eriri ịgbado ọkụ Machine Quotes
Face nkpuchi Earloop ịgbado ọkụ igwe Manufacturers
Ewepụghị Face Nkpuchi Machine Factory
Ewepụghị Nkpuchi Machine
Ewepụghị Nkpuchi Machine Factory
Ewepụghị Nkpuchi igwe Manufacturers
Ewepụghị Nkpuchi Machine Suppliers
Ewepụghị Nkpuchi Machinery
Ewepụghị nkpuchi Production
Ewepụghị Nkpuchi Production Machine
Nkpuchi ntị Loop ịgbado ọkụ Machine Manufacturers
Ihe mkpuchi mkpuchi Ultrasonic
china n95 nkpuchi Ndinam igwe Face Mask Machine ...